Incwadi Yesingeniso | RayHaber | raillynews
IkhayaIzindaba zeSitimelaKungani Kuthengisa?Shicilela Isingeniso!
Amanani Wokukhuthaza Wamanje we-2020 - Izinkampani zaseTurkey
Kuyinhlanganisela yokukhangisa nolwazi. Isakhiwo samagama esikhangiso sivela ekuhlanganisweni kwamagama athi "ukukhangisa" nesihleli se-ial .. Lapho wenza umkhangiso wokukhangisa wanoma yimuphi umkhiqizo noma insizakalo, ihlose ukufinyelela lolu lwazi nezithameli eziqondiwe. Njengoba sikudala se-inthanethi, ezinye izindlela zokukhangisa esikhundleni semikhangiso ezingamanga zithinta bobabili abakhangisi futhi sihlose izilaleli kakhulu. Ngakho-ke, isilinganiso sokubuya kwesikhangiso somkhangiso siphakeme impela.
Isikhangiso / Isikhangiso
Cha Uhlobo lwesikhangiso isitatimende imali
3.1 Nsuku zonke (iyunithi eli-1) Umbhalo, ukubukwa nesixhumanisi, Umbhalo ongenakuqhathaniswa we-Dofollow £ 150
3.2 Njalo ngesonto (izinto ezi-3) Umbhalo, ukubukwa nesixhumanisi, Umbhalo ongenakuqhathaniswa we-Dofollow £ 400
3.3 Njalo ngenyanga (amayunithi ayi-12) Umbhalo, ukubukwa nesixhumanisi, Umbhalo ongenakuqhathaniswa we-Dofollow £ 1.500
Ngezindatshana zokuphakanyiswa eziyisampula Chofoza lapha!
Amanani awafaki i-VAT yazo zonke izikhangiso.
Izixhumanisi ezisezinhlokweni zokuphromotha kufanele okungenani zibe ngu-3.
Izithombe ezi-5 noma ividiyo eyi-1 yamukelwa.
Ukubheja, ukugembula, izindatshana zokuphromotha ezingaphezulu kweminyaka engu-18 azemukelwa.
Ukushicilela iphepha elimhlophe
Isingeniso sakho zokuxhumana @rayhaberPlay Ungayithumela ekhelini lethu noma ungasithinta ngenombolo yocingo engezansi.
Ngemuva kokuba incwadi yesingeniso ishicilelwe, isixhumanisi sokushicilelwa sithunyelwa kwikhasimende. Ngosuku olufanayo ngemuva kwesheke, inkokhelo ikhokhiswa njengokudluliselwa kwebhange noma izinkokhelo zakwa-PayPal.
Ukukhokha kutholakala ngamaphakheji weviki nanyanga zonke ngaphambi kwesikhathi.
@: thinta u-rayhaberPlay
Amanani Wangempela Wezindaba Zokukhangisa ze-2020 (Iphepha lezindaba) - Izinkampani ezingafani neTurkey
Yisethulo solwazi ngokukhangisa. Isakhiwo samagama esikhangiso sivela ekuhlanganisweni kwamagama athi "ukukhangisa" kanye "nesihleli". Ngenkathi wenza ukukhangisa okukhangisayo kwanoma imuphi umkhiqizo noma insizakalo, kuhloswe ukukufinyelela kubabukeli okuqondiwe ngalo lwazi. Njengoba sikudala se-inthanethi, izindlela zokukhangisa zezikhangiso esikhundleni sezikhangiso eziqanjiwe zithinta bobabili abakhangisi futhi sihlose izilaleli kakhulu. Ngalesi sizathu, izinga lokubuya kwezikhangiso zokukhangisa liphezulu impela.
Izindaba Zokukhangisa / Ukushicilelwa Kwezindaba
Cha Uhlobo lwesikhangiso Incazelo Intengo (ngesikhangiso ngasinye)
3.1 Nsuku zonke (igama eli-1) Umbhalo, isithombe nesixhumanisi, i-Dofollow ayiphelelwa yisikhathi 75 EUR
3.2 Njalo ngesonto (izikhangiso ezi-3) Umbhalo, isithombe nesixhumanisi, i-Dofollow ayiphelelwa yisikhathi 200 EUR
3.3 Njalo ngenyanga (izikhangiso eziyi-12) Umbhalo, isithombe nesixhumanisi, i-Dofollow ayiphelelwa yisikhathi 750 EUR
Chofoza lapha amasampula!
Ukubheja, ukugembula, okuqukethwe kwe-+18 kokuphromotha akwamukelwa.
Thumela isikhangiso sakho ku-imeyili zokuxhumana @rayhaberPlay noma ungaxhumana nathi.
Ngemuva kokushicilelwa kwesikhangiso, isixhumanisi sokushicilelwa sithunyelwa kwikhasimende. Ngosuku olufanayo ngemuva kwesheke, inkokhelo ikhokhiswa njengokudluliselwa kwebhange noma izinkokhelo zakwa-PayPal.
Ukukhokha kutholakala ngamaphakheji weviki nanyanga zonke ngaphambili.
News24.com - Izindaba Ezintsha. Kuqala. Thola iNews24 kumakhalekhukhwini wakho
I-RAYİHALE Ikhishwa I-International International Rail System Amathengi (IZINDABA EZIKHULULEKILE)
UNgqongqoshe Yıldırım Wheel Lathe Facility uzovula ukusakaza bukhoma
I-SEO Yendatshana Yokuphakamisa RayHaber
İsa ApaydınYerliife ukukhiqizwa ukukhiqizwa kukamagazini wasekhaya kanye nokwazwelonke ku-Rail '…
UNgqongqoshe Arslan sika "Central Corridor Turkey ne Central Register" Article Raillif ukuze ...
Isaziso seTender: Uhamba ngezinyawo eziya e-Yazihan Station
I-Bursa ihlangene nemilayezo eyodwa ihlangane ne-pir
Uchwepheshe wezobuchwepheshe uSergeant Polat Özbek ohamba ngezinyawo owethulwa
Izimoto Zasekhaya Zizokwethulwa Ngasiphi Isikhathi? Nini?